Kucheka Simbi Plate
Yakakwira Hunhu Gwara Revhiri Us ...
High nemazvo Transmission ...
High nemazvo nokuchengetedza Gear ...
Hot Sale S Head akamedura Camsh ...
High Quality Simbi Kucheka ...
Yakakwira Hunhu Moto Gomba
Chigadzirwa Zita Yakakwira Hunhu Moto Gomba Chinyorwa Carbon simbi, Simbi isina simbi, Alloy simbi Magadzirirwo Maererano nemutengi kudhirowa Surface Rust ruvara, Natural kara kana Yakakwira tembiricha pendi OEM Gamuchira yakasarudzika chigadzirwa Kugadzira Kugadzira Stamping, Kutenderera kana Kupatsanura Welding Chikumbiro Chakaiswa kune kupisa, kukora kana kushongedza. Hunhu Standard ISO 9001: 2008 Hwakanaka system chitupa Warranty Period 1 gore Package Wooden kesi, ...
Nokuchengetedza zvikamu Chishandiso chebasa kana chisina kuvharwa chinowanikwa nekugadzira uye kuomesa simbi isina chinhu. Iyo michina maficha esimbi billet inogona kuchinjwa nekuisa kumanikidza kuti iite kuti ibudise deformation yepurasitiki.
High Quality ekisero chokurukisa Tube
Chokurukisa Tube chikamu chakakosha cheiyo mota yekutyaira ekisero gungano, inoumba chikamu chakakosha neimba yekutyaira ekisero, kuitira kuti axial hama chinzvimbo cheiyo kuruboshwe uye kurudyi mavhiri emota akagadzika, achitsigira huremu hwefuremu pamwe neungano pamwechete, uye Kutakura simba remugwagwa uye nguva kubva pagumbo apo mota iri kutyaira, uye ichipfuura nekumiswa kune furemu.
High nemazvo Transmission Spline chokurukisa
Spline chokurukisa michina kutapurirana, runyararo kiyi, semicircular kiyi, oblique kiyi basa yakafanana, ndiko kuchinjiswa kwemakanika torque, pakuonekwa kweiyo shaft ine yekureba nzira, yakaiswa pamubato wechikamu chinotenderera inewo inoenderana kiyi, Unogona kuchengeta synchronous kutenderera neiyo shaft.Panguva imwecheteyo yekutenderera, mamwe anogona zvakare kuve akareba kutenderera pane iyo shaft, senge giya bhokisi rekuchinja giya, nezvimwe.
Yakakwira Hunhu Gwara Revhiri Rinoshandiswa Kune Yakafanogadzirwa Kuvaka Machini
Gwara Rinotungamirachikamu chakakosha chinoshandiswa mukugadzira michina yemusangano.Mumutsetse wekugadzira, unonyanya kushandiswa kutakurwa kwekufambisa uye kutsigirwa kwetafura yekufa. Iyo yekumisikidza nzira yepasi kufamba vhiri inofanirwa kutemerwa zvinoenderana nemamiriro ari pane saiti - kuisa H simbi kana kuisa iyo yekuratidzira bhodhi.
High Quality ekisero chokurukisa Nut
Chokurukisa nzungu imhando yenzungu inoshandiswa zvakanyanya mutiraki, tirera nemamwe maindasitiri. Yayo inoshanda musimboti kushandisa yekuvharira ndiro yekukiya Zvisinei, kuvimbika kwerudzi urwu rwekukiya kuchaderedzwa pasi pesimba mutoro.Pane dzimwe nguva dzakakosha isu tinotora mamwe anopesana-akasimba matanho ekuona kuvimbika kweiyo nut kukiya.
Kupisa Kutengesa S Musoro Wakamedura Camshaft yeRori Zvikamu Braking System
Iyo S Brake camshaft kunyanya ine CAM uye shaft tsvimbo, iyo CAM yakabatana neiyo shaft tsvimbo, inozivikanwa neyakajeka CAM uye iyo shaft tsvimbo, chikamu chehurefu cheCAM chakanangana neyakaenzana S-yakaumbwa, uye S-yakaumbwa maviri ekunze arcs ari iyo iri pakati peCAM yakakomberedza denderedzwa inosangana. CAM iri panoperera shaft rod.Naizvozvo, ine kuenderana kwakanaka nemotokari brake braking system, uye simba rekutapurirana rakanyanya yunifomu mukutenderera, uye kukakavara coefficient idiki, kuitira kudzora kusakara uye kubvarura mukushandisa mashandiro, kuwedzera hupenyu hwebasa uye kudzikisa mari yekuchengetedza.Kune rimwe divi, S-mhando camshaft hutachiona mhedzisiro iri nani, inogona kunyatso kusangana nezvinodiwa zvehukuru kutapurirana torque , maitiro anoshanda ari nani.
Yakakwira mhando Chitubu
Spring Chikamu chinoshandiswa chinoshandisa kusimba kushanda. Zvikamu zvakagadzirwa nezvinhu zvakaomarara zvakaremara pasi pechiito chemasimba ekunze, uye zvinodzokera kumamiriro avo epakutanga mushure mekubvisa masimba ekunze.Anonziwo "chitubu."
Yakakwirira Hunhu Hemispherical Musoro
Hemispherical musoro zvinoreva musoro wakagadzirwa nehafu yedenderedzwa uye yakatwasuka kumucheto (humburumbira pfupi chikamu) Iyo nharaunda yekukombama kwedenderedzwa ganda rakafanana kwese kwese, uye simba iunifomu.
Yakakwira Dhivha Yakasviba Musoro
Dished musoro zvinoreva musoro wakaumbwa nedenderedzwa denderedzwa, rakatenderera pamupendero uye rakapfava mucheto (humburumbira kupfupisa kurapwa) .Nekuda kwechimbichimbi shanduko mune nharaunda yekukomberedza kwedenderedzwa goko uye flange, iyo flange uye yakatwasuka kumucheto kwekubatana. ,
Yakakwira Hunhu Elliptical Musoro
Musoro welliptical zvinoreva musoro wakaumbwa nehafu yegirobhu yeganda uye yakatwasuka (cylinder zamu) Nekuti iyo nharaunda yekukomberedza kweiyo elliptic curve inochinja ichienderera
Yakakwira Hunhu Kugadzira Flange
Flange inozivikanwawo seFlange Flange plate.Flange iri shaft uye shaft yakabatana zvikamu, zvinoshandiswa kubatana pakati pepombi kumagumo; Inobatsirawo kune flange pane inlet uye nzira yekubuda kwemidziyo yekubatana pakati pemidziyo miviri.
KeroXusheng Village, Shuangshan Subdistrict Hofisi, Zhangqiu, Jinan, Shandong, China